Colaaddii Hiiraan oo laga gaaray heshiis hordhac ah | KEYDMEDIA ONLINE
Colaaddii Hiiraan oo laga gaaray heshiis hordhac ah
Heshiis hordhac ah ayaa laga gaaray colaado maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa Gobolka Hiiraan, kuwaas oo u dhaxeeyay Maleeshiyaad ka kala tirsan labo beel oo walaalo ah.
Baladweyne, Soomaaliya - Wafti dhexedhexaadin ah oo ka socday Dowladda Fadaraalka Soomaaliya iyo Dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa ku guuleysaty in ay damiyaan dagaallo qasaare xooggan dhaliyay oo dhawaanahaan ka holcayay degaanno hoos taga magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
“Shir dib u heshiisiin ah oo u socday odayaasha iyo wax garadka beelaha walaalaha ah ee Baladweyne ku dagaalamay oo ay garwadeyn ka ahaayeen masuuliyiin heer fadaraal iyo heer Dowlad goboleed, ayaa laga gaaray heshiis hordhac ah” sida lagu sheegay, war ka soo baaxay guddiga loo saaray xallinta colaada.
Qodobada la isku af-gartay waxaa ka mid ah, In ciidamada labada beel la kala diro, in tuuleeyinka lagu diriray noqdaan goobo hubka ka caaggan, in degaankaas cid gooni ah dhisan karin inta la soo gabagabeynayo heshiiska, iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay in ciddii heshiiska jabisa laga qaadi doono lacag gaareysa 3000 oo doolarka Mareykanka ah.
Colaaddaan maanta laga gaaray heshiiska hordhaca ah ayaa u dhaxeeyay laba Maleeshiyo Beeleed oo walaalo ah oo wada dega Galbeedka magaalada Baledweyne, waxayna ka billaabatay dhul beereed lagu murmay.